आफू हा’रेर ममताले कसरी जितिन तेस्रो पटक पश्चिम बङ्गाल ? नेपालका नेताले केही सिक्लान ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. आफू हा’रेर ममताले कसरी जितिन तेस्रो पटक पश्चिम बङ्गाल ? नेपालका नेताले केही सिक्लान ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
आफू हा’रेर ममताले कसरी जितिन तेस्रो पटक पश्चिम बङ्गाल ? नेपालका नेताले केही सिक्लान ?
तेस्रो पटक पश्चिम बङ्गालको चुनाव जितेर ममताले प्रमाणित गरिन् कि उनीसँग उनको राज्यमा अरू कसैको तुलना सम्भव छैन तर उनले आफ्नो सिटमा भने जित्न सकिनन् । यद्धपी भारतीय विश्लेषकहरूका अनुसार उनी पुन मुख्य मन्त्री बन्ने छिन तर कसैले पनि उनलाई नैति’कताको प्रश्न उठाउने छैन ।
आफू हा’रेर पनि पार्टीलाई जिताउन सकिन्छ भन्ने पाठ ममताले विश्वलाई पढाएकी छिन् । आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्री भा जपा प्रवेश गरेको कारण आफ्नो सुरक्षित सिटमा अरुलाईनै उठाएर ग’द्दारलाई आफ्नै ल’डेर हरा’उँछु भन्दै उनले जो’खिम मोलेकी थिइन ।
बेनर्जीको तृष्णमूल छोडेर भारतीय जनता पार्टीमा लागेका प्रतिस्पर्धी शुभेन्दु अधिकारीलाई ह’राउन उनले मोलेको जो’खिमले पनि उनको पार्टीमा ज्यान भरेको थियो त्यही भएर २९२ सिटमा भएको निर्वाचनमा उनले २१३ सिटमा जित हात पारिन।
दुई तिहाइ भन्दा बढी सिटमा जित हात पारेपछि उनको चर्चा ,उचाइ र शक्ति पहिले भन्दा धेरै माथि पुगेको राजनीतिक विश्लेषक हरू बताउँछन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको May 3, 2021 May 3, 2021 329 Viewed